Ukutyelela iNdlu kaMongameli eKabul kunye neTaliban Fighters njengezikhokelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » Ukutyelela iNdlu kaMongameli eKabul kunye neTaliban Fighters njengezikhokelo
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Taliban kwiNdlu kaMongameli
Inkokheli yeTaliban uMullah Abdul Ghani Baradar ubhengezwe njengomongameli omtsha wase-Afghanistan.
I-Taliban Fighters inika amathuba eefoto kwiintatheli zeAl Jazeera ezivela kwiofisi kamongameli eKabul.
Umongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani uyishiyile i-Afghanistan ngelixa i-Taliban ivala iKabul, ngokutsho kuka-Abdullah Abdullah.
I-Al Jazeera TV ibisasaza ingxelo ekhethekileyo ngaphakathi kwibhotwe ebonisa iTaliban FIghters ehleli kwiofisi kamongameli eKabul
The Umzi wozakuzo wase-US eKabul iyalela ii-cirizens zase-US malunga neengxelo ezimalunga nesikhululo senqwelomoya saseKabul. Iingcebiso kubantu baseMelika zixinene e-Afghhanistan ukuba ziye kuhlala kwindawo yazo
I-Emirate yamaSilamsi yase-Afghanistan iya kubhengezwa yiTaliban
I-Taliban Regime icwangcisa ukuyithiya ngokutsha i-Afghanistan ibe yi-Islamic Emirate yase-Afghanistan.
Okwangoku i-United States ithumela amajoni angama-6000 ngqo e-Afghanistan, la ngamawaka ongezelelweyo angama-1000 ukuya kwangama-5000 asendleleni.
Iintatheli ezixela uthungelwano lweendaba olusekwe eQatar Al Jazeera bamenyiwe namhlanje ukuba batyelele iNdlu kaMongameli eKabul, eAfghanistan. Abadlali beTaliban babesima eofisini kamongameli ngemipu.
Kubonakala ngathi kukho uloyiko kunye noloyiko, kodwa akukho kuphalala gazi kuxeliweyo kwiCapital CIty yaseKabul namhlanje nabalwi beTaliban abalawula isixeko ngesantya serekhodi.
It yaqala kusasa ngeCawa, nge-15 ka-Agasti, kwaye yaphela ebusuku. I-Afghanistan ibuyile phantsi kolawulo lweTaliban emva kweminyaka engama-20 kwaye izigidi zezigidi zichitha ukuyikhupha.
Ukuhamba kwexesha ngeCawa, kwabhengezwa ukuba uGhani ulishiyile ilizwe kunye namalungu aliqela ekhabinethi yakhe.
“Owayesakuba nguMongameli wase-Afghanistan umkile e-Afghanistan. Usishiyile isizwe sikule meko [kuba] uThixo uza kumphendulisa, ”utshilo u-Abdullah Abdullah, ongusihlalo weBhunga eliPhakamileyo loXolelwaniso lweSizwe kwividiyo eposwe kwiphepha lakhe likaFacebook.
Ukuwa korhulumente oxhaswa yiNtshona eKabul kuza emva kweTaliban blitzkrieg eyaqala nge-6 ka-Agasti kwaye yakhokelela ekubanjweni kwamaphondo angaphezu kweshumi elinambini e-Afghan ngentsasa yangeCawa.
Umongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani ubalekile e-Afghanistan esiya eTajikistan. Oku kubonwa njengokungathandani nabemi base-Afghanistan.
Amazwe asentshona adidekileyo ayangxama ukukhupha abasebenzi bommeli. Inkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson ubongoza amazwe ukuba angamamkeli urhulumente waseTaliban wase-Afghanistan.
Ukuphelelwa lithemba: Abantu kwizikhululo zeenqwelomoya abazama ukubaleka iTaliban ihlale iAfghanistan
Bamalunga ne-1500 abemi baseNepal eAfghanistan. Umphathiswa Wezangaphandle waseNepal uthe iNepal izama ukwenza amalungiselelo okunceda abemi bayo ukuba bashiye iAfghanistan.
IFransi yathutha indawo yayo yozakuzo iye kwisikhululo senqwelomoya eKabul, ngelixa iingxelo zaseMelika zisithi isikhululo seenqwelomoya sasivutha umlilo kwaye savalwa. Oonozakuzaku be-EU bafuduselwe kwiindawo ezingachazwanga.
UKUQHUBEKA: Isiphithiphithi kwisikhululo senqwelomoya saseKabul eAfghanistan njengoko amakhulu ezama ukubaleka ilizwe ngokukhawuleza. pic.twitter.com/jwui8bjbFs
Iphepha langaphakathi (@TheInsiderPaper) Agasti 15, 2021
Isiphithiphithi eKabul AIrport
Oonozakuzaku abalekayo ukubaleka. Kubonwa kwi-Embassy yasePakistan eKabul, e-Afghanistan
Isebe likaRhulumente wase-US lipapashe olu dliwanondlebe noMphathiswa Wezangaphandle wase-US u-Anthony Blinken ngeendaba ze-ABC
U-Antony J. Blinken, Nobhala Wezwe
UMBUZO: Ke ngoku uNobhala welizwe uTony Blinken. Unobhala Blinken, enkosi ngokuzibandakanya nathi.
UNOBHALA BLINKEN: Enkosi ngokuba nam.
UMBUZO: Masiqale ngobume bozakuzo wethu eKabul. Ngaba uqinisekile kukhuseleko lwabasebenzi baseMelika kwindlu yozakuzo nanjengoko iTaliban irhangqa iKabul?
UNOBHALA BLINKEN: Lowo ngumsebenzi kum, John. Sisebenza ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bethu bakhuselekile kwaye bakhuselekile. Sifudusa amadoda namakhosikazi oonozakuzaku bethu baya kwindawo kwisikhululo seenqwelomoya. Kungenxa yoko le nto uMongameli ethumele iqela lemikhosi ukuqinisekisa ukuba, njengoko siqhubeka nokwenza ubukho bezopolitiko, sikwenza ngendlela ekhuselekileyo nenocwangco kwaye kwangaxeshanye sigcine ubukho bozakuzo eKabul.
UMBUZO: Ke makhe ndiqiniseke ukuba ndikuvile ngokuchanekileyo. Uhambisa abasebenzi kwi-ambassy-ngaba oko kuthetha ukuba uvala i-ambassy yase-US eKabul, ukuba eso sakhiwo siya kushiywa?
UNOBHALA BLINKEN: Okwangoku, isicwangciso esisisebenzisayo kukuhambisa abasebenzi kwiziko lozakuzo eKabul baye kwindawo kwisikhululo seenqwelomoya ukuqinisekisa ukuba banokusebenza ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo, kunye nokuqhubeka nokuba nabantu bashiye iAfghanistan Besisenza ukusukela ngo-Epreli-ngasekupheleni kuka-Epreli, ngo-Epreli wama-28. Oko sagwetyelwa ukususwa ukusukela ngoko. Sikwenze ngabom. Sihlengahlengisile ngokuxhomekeke kwiinyani ezisemhlabeni. Kungenxa yoko le nto sasinemikhosi esesandleni uMongameli ayithumele kuyo ukuqinisekisa ukuba singakwenza oku ngendlela ekhuselekileyo nenocwangco. Kodwa ikhompawundi uqobo - abantu bethu bemka apho kwaye bafudukela kwisikhululo seenqwelomoya.
UMBUZO: Uxwebhu lwangaphakathi oluya kubasebenzi bozakuzo ngolwe-Sihlanu luyalela abasebenzi baseMelika kwindlu yozakuzo ukuba banciphise ulwazi olunobuzaza kwipropathi, kwaye ikwathi, “Nceda… faka izinto ezinobunono bozakuzo okanye zearhente, iiflegi zaseMelika, okanye izinto ezinokusetyenziswa gwenxa kwimizamo yokusasaza ubuxoki. ” Ngokucacileyo inkxalabo apha kukuba i-Taliban- kwaye le ikwayiyo, ndicinga ukuba, kutheni ususa abantu kwisikhululo seenqwelomoya- ukuba iTaliban ingoyisa kwaye ithathe indawo yozakuzo.
UNOBHALA BLINKEN: Le yinkqubo yokusebenza esemgangathweni nakweyiphi na imeko enjalo. Kukho izicwangciso ezikhoyo ukuba sishiya indawo yozakuzo, sifudusela abantu bethu kwenye indawo, ukuthatha onke loo manyathelo, lawo uwabalileyo. Ke yile nto kanye esiya kuyenza nakweyiphi na kwezi meko, kwaye kwakhona, oku kwenziwa ngendlela enabom, kwenziwa ngocwangco, kwaye kuyenziwa nemikhosi yaseMelika apho ukuze siqiniseke ukuba singayenza ngendlela ekhuselekileyo.
UMBUZO: Ngokuhlonela, ayisiyiyo into esiyibonayo ebonakala ngathi icwangciswe kakuhle okanye inkqubo yokusebenza esemgangathweni. Kwinyanga ephelileyo, uMongameli Biden wathi phantsi kwazo naziphi na iimeko- kwaye yayilelakhe- lawo yayingamazwi akhe - naphantsi kwazo naziphi na iimeko yayingabasebenzi baseMelika, abasebenzi bozakuzo bakhutshwa ngenqwelomoya eKabul kwimpinda yemiboniso esayibona eSaigon ngo1975. Ngaba ayisiyiyo kanye le siyibonayo ngoku? Ndiyathetha, nkqu nemifanekiso ivusa into eyenzekileyo eVietnam.
UNOBHALA BLINKEN: Masithathe inyathelo ukubuyela umva. Ngokucacileyo ayisiyiSaigon. Inyani yento yile: Saya e-Afghanistan kwiminyaka engama-20 eyadlulayo sinenjongo enye engqondweni, kwaye yayikukujongana nabantu basihlasela nge-9/11. Kwaye loo mishini iphumelele. Sizise uBin Laden kwezobulungisa kwiminyaka elishumi eyadlulayo; I-al-Qaida, iqela elasihlaselayo, liye lancipha kakhulu. Isikhundla sayo sokusihlasela kwakhona sivela eAfghanistan besikhona - okwangoku asikho, kwaye siza kuqinisekisa ukuba sigcina amandla engingqi, imikhosi eyimfuneko yokubona ukuphinda kuvele kwesoyikiso sobunqolobi kwaye ukwazi ukujongana nayo. Ke ngokwento ebesizimisele ukuyenza e-Afghanistan, siyenzile.
Kwaye ngoku, ngalo lonke ixesha, uMongameli wayethathe isigqibo esinzima, kwaye eso sigqibo yayiyinto yokwenza nemikhosi esele siyifumene xa sifika e-ofisini eyayise-Afghanistan, kunye nomhla obekiweyo osekwe ngabaphathi bangaphambili ukubafumana. uphume nge-1 kaMeyi. Eso sisigqibo asithathileyo. Sibe e-Afghanistan iminyaka engama-20- $ 1 trillion, i-2,300 yaseMelika ilahlekile- kwaye kwakhona, ngombulelo, siphumelele ekwenzeni oko besizimisele ukukwenza kwasekuqaleni. UMongameli wenza isigqibo sokuba yayilixesha lokuphelisa le mfazwe e-United States, ukuba aphume embindini wemfazwe yamakhaya e-Afghanistan, kwaye aqiniseke ukuba sijonga umdla wethu kwihlabathi liphela, Kwaye sasicwangciselwe ukuqhubela phambili loo mdla. Yiloo nto esiyenzayo.
UMBUZO: Kodwa uMongameli ukwacetyisiwe ngabacebisi bakhe abaphambili emkhosini, njengoko ndiqonda, ukuba ashiye ubukho bemikhosi kwilizwe elinamalunga ne-3-4,000 yamajoni ase-US. Ngaba kukho ukuzisola ngoku ukuba engalithathanga elo ngcebiso, ingcebiso yabacebisi bakhe abaphambili emkhosini, ukuba ashiye ubukho emkhosini eAfghanistan?
UNOBHALA BLINKEN: Nalu ukhetho uMongameli ajongene nalo. Kwakhona, khumbula ukuba umhla wokugqibela wasekwa ngurhulumente wangaphambili kaMeyi 1 ukuze imikhosi yethu eseleyo iphume eAfghanistan. Kwaye umbono wokuba sinokuthi sigcine imeko ngokugcina imikhosi yethu apho ndicinga ukuba ayilunganga, kuba nantsi into ibinokwenzeka ukuba uMongameli uthathe isigqibo sokuyigcina apho: I-Taliban ibiyekile ukuhlasela imikhosi yethu, iyekile ukuhlasela imikhosi ye-NATO. Ikwazibambezele kolu hlaselo lukhulu silubonayo ngoku ukuzama ukuthatha ilizwe, siye kwezi ngqukuva zephondo, neziphumelele kwezi veki zidlulileyo.
Yiza nge-2 kaMeyi, ukuba uMongameli uthathe isigqibo sokuhlala, zonke iigloves ngekhe zacinywa. Ngesiye sabuyela emfazweni neTaliban. Ngebehlasele imikhosi yethu. Ngesiba ne-2,500 okanye imikhosi esele kwilizwe kunye namandla omoya. Andiqondi ukuba bekunokwanela ukujongana nale nto siyibonayo, ecekisekayo kwilizwe liphela, kwaye bendiya kuba kule nkqubo kwimeko apho kufanele ukuba ndichaze ukuba kutheni sithumela amashumi amawaka Imikhosi ibuyela eAfghanistan ukuze iqhubeke nemfazwe ilizwe elikholelwa ekubeni kufuneka liphele emva kweminyaka engama-20, i-1 yezigidi zeedola, kunye ne-2,300 yobomi elahlekileyo, kunye nempumelelo ekufezekiseni iinjongo esizibekileyo xa sasingena kwindawo yokuqala.
UMBUZO: Makhe ndikudlalele into eyathethwa nguMongameli Biden ekuqaleni kwalo nyaka xa wayebuzwa malunga nethemba lokuba yintoni, ngokusisiseko, esiyibonayo ngoku, ukuthatha kweTaliban iAfghanistan:
Amathuba okuba kubekho i-Taliban egqogqa yonke into kwaye ubunini belizwe lonke awunakulindeleka. "
Ngaba ke ulahlekisiwe ziiarhente zakhe zobukrelekrele? Ngaba akazange abaphulaphule? Kwakutheni ukuze aphazame ngaloo nto?
UNOBHALA BLINKEN: Zimbini izinto. Utshilo kwaye besitshilo lonke elixesha ukuba iTaliban ibisendaweni yamandla. Ukufika kwethu e-ofisini, iiTaliban zazikwindawo yayo eyomeleleyo nangaliphi na ixesha ukusukela ngo-2001, kuba yayisemandleni e-Afghanistan ngaphambi kwe-9/11, kwaye ikwazile ukwakha amandla ayo kule minyaka imbalwa idlulileyo indlela ebalulekileyo. Ke yinto ebesiyibona siyibona kwangaphambili.
Sele ikuthethile oko, Imikhosi yoKhuseleko e-Afghan-Imikhosi yoKhuseleko e-Afghan esityala kuyo, uluntu lwamanye amazwe lutyale imali iminyaka engama-20-lwakha umkhosi wama-300,000, bebaxhobisa, bemi ngakwimikhosi yomoya ababenayo i-Taliban Khange abenalo - loo mandla abonakalise ukungakwazi ukukhusela ilizwe. Kwaye oko kwenzeka ngokukhawuleza okukhulu kunokuba besikulindele.
UMBUZO: Ke oku kuthetha ntoni emfanekisweni waseMelika emhlabeni nakwinto athe wayithetha uMongameli Biden ngamandla, isidingo sokulwela idemokhrasi kunye neenqobo zedemokhrasi, ukusibona siphuma kunye neqela elineengcwangu lingena lithatha amandla. efuna ukuvala ilungelo lamantombazana lokuya esikolweni, oko kukunikezela ngamajoni, akukho nto ngaphandle kokumelwa kwezo demokrasi u-Mongameli Biden wathi i-United States kufuneka iyimele?
UNOBHALA BLINKEN: Ke ndicinga ukuba zimbini izinto ezibalulekileyo apha. Kuqala, ndibuyela kwesi siphakamiso sokuba ngokwento ebesizimisele ukuyenza eAfghanistan - isizathu sokuba sibe lapho kwasekuqaleni, ukujongana nabo basihlaselayo nge-9/11 -siphumelele ukuyenza loo nto. Kwaye lo myalezo ndicinga ukuba kufuneka ukhale ngamandla.
Kuyinyani ukuba akukho nto abo sikhuphisana nabo kwihlabathi liphela abanokuthanda ngaphezulu kunokusibona sibambekile e-Afghanistan eminye iminyaka emihlanu, elishumi, okanye engamashumi amabini. Ayisiyonto inomdla kuzwelonke.
Enye into yile: Xa sijonga abantu ababhinqileyo kunye namantombazana, bonke abo sele beqhubele phambili ebomini babo, oku kukutsha. Yinto enzima leyo. Ndidibene nenani lezi nkokeli zabasetyhini zenze okuninzi kwilizwe labo kunye nabafazi kunye namantombazana eAfghanistan kule minyaka ingama-20 idlulileyo, kubandakanya kutshanje ngo-Epreli xa ndandiseKabul. Kwaye ndicinga ukuba ngoku kunyanzelekile kuluntu lwamanye amazwe ukuba lwenze konke esinako ukusebenzisa zonke izixhobo esinazo-zoqoqosho, ezopolitiko, ezopolitiko-ukuzama ukugcina iinzuzo abazenzileyo.
Kwaye okokugqibela kukuzithanda kweTaliban- kufuneka benze isigqibo, kodwa bakwiminqweno yabo ukuba bafuna ngokwamkelekileyo, ukwamkelwa kwilizwe liphela; ukuba bafuna inkxaso, ukuba bafuna ukuba isohlwayo sisuswe - konke oko kuyakufuna ukuba baxhase amalungelo asisiseko, amalungelo asisiseko. Ukuba abenzi njalo kwaye ukuba bakwisikhundla samandla kwaye abayenzi loo nto, ndicinga ukuba i-Afghanistan iyakuba lilizwe le-pariah.
UMBUZO: UNobhala welizwe u-Tony Blinken, enkosi kakhulu ngokuzibandakanya nathi ngale ntsasa.